I-trailer 'ye-Resort' yethula uhlobo olusha lwamakhaza lwendaba yezipoki - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-trailer 'ye-Resort' yethula uhlobo olusha lwamakhaza lwendaba yezipoki
Ngiyakuthanda ukusungulwa kabusha futhi sekube nokuncane kakhulu kwalokho muva nje. Amafilimu amafa nokunye okufana nalokhu bekushintshana futhi kungena ezindaweni ezintsha. I-trailer yeThe Resort ibukeka yenza okufanayo nefomethi yendaba yesipoki esezamile futhi eyiqiniso. Lokhu kubheka ukuhlanganisa indaba yesipoki nento enezinto ezixutshwe nayo.
Amazwibela we Indawo Yokungcebeleka kuhamba kanjena:
U-Lex ungumbhali okhathazeke ngokweqile ngokujwayelekile. Ngosuku lwakhe lokuzalwa, abangane bakaLex abathathu abasondelene naye banquma ukumthatha bahambe naye bengalindele e-resort engasasebenzi eHawaii. Indawo yokungcebeleka kucatshangwa ukuthi iyisipoki esidume kabi, iThe Half-Faced Girl, kanti uLex uzimisele ngokumthola. Lapho befika esiqhingini, bathola indawo enkulu, enhle futhi eerily engenalutho. Njengoba nje uLex ethatha isinqumo sokuthi lokhu bekuyinsumansumane yasemadolobheni, abangane bakhe baqala ukunyamalala ngamunye ngamunye, bamshiye bethola umoya omubi.
Indawo Yokungcebeleka iphuma ngo-Ephreli 30 kumatiyetha akhethiwe nakuVOD.
Ngabe nina nicabangani nge-trailer Indawo Yokungcebeleka? Sazise esigabeni sokuphawula.
Igazi Elijulile livela eSeverin futhi likunikeza ukuqhekeka kwemihlathi ngokungafani nanoma yini oyibonile. Bheka i-trailer lapha.
Dlulisa amehlo kuma-Cateories Khetha Category I-Amazon (i-movie) (7) I-Amazon (uchungechunge) (11) I-AppleTV + (4) Imisebe ye-Blu (8) Amahlaya Ahlekisayo (49) Amahlaya (13) Izinto Ezipholile Zokuthenga (5) I-Facebook (uchungechunge) (1) Izinganekwane (43) Kutholakale amavidyo (28) I-Gore (24) I-HBO (ama-movie) (6) I-HBO (uchungechunge) (7) Izincwadi zeHorror (58) Izindaba zeHorror Entertainment (10,787) Ama-movie asabisayo (323) Uchungechunge lwe-Horror (83) Ama-Horror Subgenres (10) IHulu (uchungechunge) (5) Izingxoxo (i-movie) (38) Izingxoxo (uchungechunge) (4) I-LGBTQ Horror (42) Uhlu (ama-movie) (38) Uhlu (uchungechunge) (2) Imakethe (19) I-Monster Horror (9) Ukubuyekezwa kwe-Movie (55) Ama-movie (14) Umculo (36) INetflix (i-movie) (29) INetflix (uchungechunge) (32) Okungeyona inganekwane (4) I-Paranormal (75) I-Psychological Horror (thrillers) (52) Ukubuyekezwa kochungechunge (9) Ukuqhaqhazela (i-movie) (46) Ukuqhaqhazela (uchungechunge) (15) I-Slasher (4) Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile (36) Ama-Movie wokusakaza (79) Uchungechunge Lokusakaza (37) Amathoyizi (2) I-trailer (i-movie) (238) I-trailer (uchungechunge) (45) Ubugebengu Bangempela (46) Imidlalo Yevidiyo (182) I-YouTube (i-movie) (3) I-YouTube (uchungechunge) (12)